“သူ သာသနာ့ဘောင် ဝင်ခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းလေးအတွက် တစ်ရက်ထဲနဲ့ သိန်းတစ်ထောင်ကျော်တဲ့အထိ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းကြလို့ ပျော်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်” – စွယ်စုံသုတ
“သူ သာသနာ့ဘောင် ဝင်ခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းလေးအတွက် တစ်ရက်ထဲနဲ့ သိန်းတစ်ထောင်ကျော်တဲ့အထိ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းကြလို့ ပျော်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်”
ကျနော်က ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းလေးမှာ ဆံချပြီး ရဟန်းဘဝရခဲ့တာပါ။ အဓိက က ကျောင်းလေးက ဆင်းရဲတဲ့ အတွက် ဒီနေရာမှာ သာသနာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒ ကြောင့် တခြားကျောင်းမှာ မဝတ်ပဲ ကျနော်ဒီမှာ ရဟန်းဝတ်ခဲ့တာပါ။
ဒီဘုန်ကြီးကျောင်းလေးက အလှူရှင် အရမ်းနည်းပါးတဲ့အပြင် ရဟန်းနေဖို့ အဆောင် ၊ ထမင်းစားဆောင် ၊ တရားချတဲ့အဆောင်၊ စာသင်ဆောင်၊ ရဟန်းတွေ အတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ သိမ်ကျောင်းဆောင် ရယ်လို့ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ မရှိပါဘူး။ သိမ်မရှိတော့ တခြားဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျနော်သိမ်ဝင်ရပါတယ်။ ဆရာတော်ကလည်း မေတ္တာကြီးမားသလို ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ အလှူလည်းမခံခဲ့ပါဘူး ။
ကျ​နော်က ရဟန်းအဖြစ်နဲ့ ဒီကျောင်းလေးမှာ တစ်ရက်ပဲ ကုသိုလ်ရေးတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ပြီးတော့မှ တယောက်တည်း တရားအားထုတ်ချင်လို့ မြဝတီမြို့ကို ထွက်သွားပြီး သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကြီးဆီမှာ ရဟန်းဘဝနဲ့ ကုသိုလ်ရေးတွေ လုပ်ပြီး တရားအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
မြဝတီမသွား ခင်မှာလည်း ဆရာတော်ကို ပြောခဲ့ပါတယ် တပည့်တော် လူထွက်လာရင် ဒီကျောင်းကို အစစအရာရာ ပြည့်စုံအောင် မတည်ပြီး လှူဒါန်းပေးမယ်လို့ တယောက်တည်းမနိုင်ရင်လည် းပရိတ်သတ်တွေကိုလည်း နိဗ္ဗာန်ဆော်ပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်
ကဲ ခုတော့ တရက်တည်း သိန်း ၁ ထောင်ကျော်ဗျာ ဝမ်းသာစရာ 🖤
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေမှာ အရမ်းကို လေးစားစရာကောင်းတဲ့ စိတ်လေးတခုရှိတယ်
အခုလည်းကြည့် မနေ့က သိမ်လေးဆောက်ချင်လို့ ကျနော့်အကောင့်မှာ နိဗ္ဗာန်ဆော်လိုက်တာ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား ကျားမ လူကြီး လူငယ် အားလုံး ဝိုင်းလှူကြတာ ကြက်သီးတောင်ထမိတယ် လေးလဲလေးစားမိတယ်
အခု ဘဏ်ထဲမှာအတိအကျရခဲ့တဲ့ အလှူငွေ တရက်တည်း စုစုပေါင်း သိန်း တစ်ထောင့်တစ်ရာခြောက်သောင်းရှစ်ရာကိုးဆယ့်နှစ် (၁၁၀၀၆၀၈၉၂) ကျပ်ရရှိပါတယ် ။ ဘဏ်ထဲမဝင်သေးတဲ့ တချို့အလှူရှင်တွေရဲ့ အလှူငွေများစွာကျန်ပါသေးတယ်ခင်မျာ။
ကျန်တဲ့ လှူဒါန်းချင်တဲ့ လူတွေလည်း ကျနော့်အလှူမှာပါဝင်လို့ရပါတယ် ခင်မျာ ။ ဆရာတော်ရဲ့ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ၁၃၁ရပ်ကွက်၊ ရေသန့်လမ်း။) ကျောင်းမှာလည်း ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းလို့လည်းရပါတယ်ခင်မျာ ။
K Pay ကနေ ပရိတ်သတ်တဦးတယောက်ချင်းလွဲပေးတဲ့ အလှူငွေ က သိန်း ၁၂၀ ကျော် ပါ
Waveက လွှဲပေးတာ ၄၅ သိန်းကျော်ပါ
ဒါကတော့ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာနဲ့ လှူခဲ့တဲ့ အလှူရှင်တွေရဲ့ နာမည်ကို ကျနော်စုဆောင်းမိသလောက် ဖော်ပြထားတာပါခင်မျာ အားလုံးလည်း နတ်လူ သာဓု ခေါ်နိုင်အောင်ပါ
🙏ပိုင်တံခွန် သိန်း (၁၀၀)
🙏ဦးစိုင်းမွန်း မိသားစု သိန်း (၂၀၀)
🙏Fancy House ဒေါ်ကြင်ပို့မိသားစု သိန်း (၁၂၆)
🙏ကိုစိုးလှိုင် (Brave Empire Production) သိန်း (၁၀၀)
🙏မိုးမြတ်မဂ်လာစိန်ရွှေဆိုင် မိသားစု။ သိန်း (၁၀၀)
🙏မလင်းမြဖူး မိသားစု သိန်း (၅၀)
🙏အကယ်ဒမီ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် မိသားစု။ သိန်း(၃၀)
🙏 ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နေခြည်ဦး။ သိန်း (၃၀)
🙏 ကို ဝေမင်းမောင် (Media 7). သိန်း (၂၀)
🙏မောင်ကိန်းရွှေဆိုင် မိသားစု သိန်း (၂၀)
🙏သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကြီး သိန်း (၁၀)
🙏 Ma Nan Nwe Ni Tun သိန်း (၁၀)
🙏 ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင်။ သိန်း(၁၀)
🙏 ဆရာဂျွန်လွင် သိန်း (၁၀)
🙏 မဖြူဖြူအောင် (အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်) သိန်း (၁၀)
🙏ကို နိုင်မောင်သူ (မြဝတီ)။ သိန်း (၁၀)
🙏 မ နန်းသန္တာကို။ သိန်း (၁၀)
🙏ဒေါ်ကျင်မြိုင် မိုနာလီဇာမိသားစု သိန်း (၁၀)
🙏မ စမိုင်းလ် တို့မိသားစု သိန်း (၁၀)
နှင့်16 Restaurant သိန်း(၁၀)
🙏 ဦးတင်အောင်ကြိုင်+ဒေါ်ဝါဝါနွယ်။ သိန်း(၅)
🙏 ကိုသူရိန်ကျော်မိုး သိန်း (၅)
🙏 ဦးထွန်း+ မပိုပိုချစ်မိသားစု သိန်း (၅)
🙏 ဆောင်းဦးနွယ် (UAB Bank) သိန်း (၅)
🙏ဦးတင်အောင်ကြိုင်+ဒေါ်ဝါဝါနွယ် သိန်း (၅)
🙏 ကိုဘိုဝင်းမြတ် သိန်း ( ၅ )
🙏ဒေါက်တာဝင့်ကြည်ညွန့်+ဒေါ်မိုးသူဇာ သိန်း (၅)
🙏ဒေါ်လှရီ မိသားစု သိန်း (၅)
🙏ဒေါ်ဖြူဖြူခင် မိသားစု သိန်း (၃)
🙏သတ္တုရတနာ company သိန်း(၃)
🙏ကို သီဟထွန်း။ သိန်း(၃)
🙏 မအဲဂျူး။ သိန်း (၃)
🙏 ဦးစံထွန်း+ဒေါ်ခင်ခင်အေးမိသားစု သိန်း (၃)
🙏 ဝင်းသန္တာဦး။ သိန်း (၃)
🙏ကိုမိုးစက်+မမီရှယ် သိန်း (၃)
🙏ကိုအောင်မင်းခန့် သိန်း (၃)
🙏 လင်းမြသူ သိန်း (၃)
🙏နန်းတင်ယုအေးနှင့်သားစိုင်းဟန်လှိုင်းတိုင်းမိသားစု သိန်း (၂)
🙏လင်းအောင်ခေတ် သိန်း (၂)
🙏 မ ရှိုးဒေဝါထွန်း သိန်း (၂)
🙏 Oscar. သိန်း (၂)
🙏ကိုအာကာမောင် YOUDEA သိန်း(၂)
🙏 ကိုဇင်။ သိန်း (၂ )
🙏Nadi Nway သိန်း (၂)
သား ဝေဖြိုးအောင် မိသားစု သိန်း(၂)
🙏Mr. Choi Seung Hun+ချောဆုမြတ်။ သိန်း(၂)
🙏မမြင့်မို မဟေသီ မိသားစု သိန်း (၁.၅)
🙏ဦးထွန်းထွန်းဦး ( မန္တ​လေး ) သိန်း(၁)
🙏မဂူဂူး မိသားစု သိန်း(၁)
🙏ဆရာမ တင်တင်လတ် မိသားစု သိန်း(၁)
🙏Snow Zaw သိန်း(၁)
🙏အဆိုတော် ပိုပို သိန်း(၁)
🙏ကိုအောင်လေး သိန်း (၁)
🙏 မစုမြတ်ခိုင် သိန်း (၁)
🙏 နန်းအေးဗိုလ်ခမ်း သိန်း (၁)
🙏Ei Ei Kyaw သိန်း (၁)
🙏Ma Aye Myat San သိန်း (၁)
🙏 ဒေါ်အိအိငြိမ်းချမ်း သိန်း (၁)
🙏ကိုဗလ + မ ရွှန်း။ သိန်း (၁)
အလှူရှင်တွေ အားလံုးကို တဦးတယောက်ချင်း နာမည်ရေးပေးချင်သော်လည်း အရေအတွက်အရမ်းများတဲ့အတွက် အခုလို စုပေါင်းဖော်ပြရတဲ့အတွက်လည်း နားလည်းပေးပါခင်မျာ
“CDM လုပ်ပြီး အပြင်မှာ အခမဲ့ဆေးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းဆရာဝန်ကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေတဲ့ နီနီခင်ဇော်”